GNU chirongwa chinopesana neGoogle. Rate software yako kune malware | Linux Vakapindwa muropa
GNU chirongwa chinopesana neGoogle. "Google software haina malware"
Iyo GNU chirongwa chinopomera Google nezve kuburitsa malware
Iri kutenderera pasocial media posvo yakaoma kubva kuGNU chirongwa chinopesana neGoogle. Musoro unotaura zvese "Google software haina malware"
Zvekudzivisa kusahadzika, mundima yechipiri yeiyo posvo iye anopa tsananguro yemarware:
Malware inonzwisiswa se software yakagadzirirwa kubata zvisina kunaka kana kukuvadza mushandisi (zvikanganiso zvetsaona hazvina kuiswa).
Kunyangwe iye achiziva kuti software yevaridzi uye malware hazvifananidzi, achiri kutora mukana kuzvishora
Sezvo mugadziri wechirongwa achiziva kuti mushandisi haakwanise kugadzirisa mashandiro akaipa, anogona kuyedzwa kuunza mamwe.
1 GNU Purojekiti Kupokana neGoogle: Zviratidzo Zvekutongwa
1.1 Masuo emashure
1.3 Kusachengetedzwa kwekuchengetedza
GNU Purojekiti Kupokana neGoogle: Zviratidzo Zvekutongwa
Zvinopomerwa neGNU Project pamusoro peGoogle zvinosanganisira:
Masuo emashure bvumira kupinda kune imwe system pasina ruzivo kana mvumo yevashandisi. Iyo projekiti yeGNU yakawana anotevera madhoo ekumashure:
Vashandisi vakasiyana veGoogle Pixel nhare uye zvimwe zvishandiso zvinomhanya Android 9 Pie akaona kuti bhatiri saver basa raive raitwa, sezvazviri ega. Uye zvinofadza, izvi zvakaitika apo nhare dzaive dzakuda kubhadhariswa zvizere, kwete kana bhatiri raive pasi.
google rakasangana paReddit iyo:
"Kuedza kwemukati kuyedza maficha ekuchengetedza bhatiri akaendeswa zvisirizvo kune vashandisi vazhinji pane zvaifungidzirwa."
Zvinoenderana nechikamu chechina chechibvumirano chemushandisi chekupedzisira:
4.1 Iyo Software inogona kungo dhawunirodha uye kuisa zvigadziriso kubva kuGoogle nguva nenguva. Izvi zvinogadzirirwa zvakagadziridzwa uye kuvandudza Software uye zvinogona kutora fomu yezvigadziriso, zvakagadziriswa mabasa, nyowani software ma module, uye shanduro nyowani. Unobvuma kupihwa ma updates akadaro (uye bvumira Google kuti ivatumire kwauri) sechikamu chekushandisa kwako Software.
Iyo GNU purojekiti haina kutora chikamu chechishanu, kunyangwe ichigona kunyatsoita kudaro:
5.2 Nguva nenguva, Chrome OS inogona kutarisa nemaseva ari kure (anotambirwa neGoogle kana mapato echitatu) kana zvinyorwa zviripo zvekushandisa uye zvinowedzeredzwa, kusanganisira asi zvisingagadziriswe kugadzirisa zvipembenene kana kushanda kwakavandudzwa. Kugadziridza kwakadai kunozokumbirwa, kurodha pasi uye kuiswa otomatiki pasina ziviso isati yaitika, uye unobvuma kumisikidzwa kwakadaro.
5.3 Nguva nenguva, Google inogona kubvisa kana kumisa kupinda kune zvinoshandiswa uye zvinowedzerwa pazvinofungidzira zvine musoro kuti mafomu akadaro uye zvinowedzera zvinogona kukuvadza kana kutsausa, kutyora mitemo kana mirau inoshanda, kana kutyora kodzero dzevamwe mapato (kusanganisira, asi kwete kuganhurirwa kusvika, kutyorwa kwekodzero yehungwaru hwevatatu).
Handina chokwadi kuti izvi zvinokodzera sekudzivirira. Ivo vanonongedzera kuGoogle Family Link application.
Iyo app inoisa pane gumi nemaviri smartphone uye inosangana nefoni yemubereki. PInokutendera iwe kudzora uye kubvumidza maapplication anoshandiswa nevana vakopamwe nekumisikidza skrini nguva uye "nguva yekurara" yechigadzirwa.
Sezvakataurwa mukati musangano wekuchengetedza, mamwe ma SDK akagadzirwa neChinese yekutsvaga hofori Baidu uye nekambani ye analytics inonzi Salmonads inogona kupfuudza dhata kubva kune chimwe chishandiso ichienda pane chimwe (uye kumaseva avo) nekuichengeta kwazviri kutanga parunhare. Vatsvagidzi vanofungidzira kuti kumwe kunyorera vachishandisa Baidu SDK vanogona kunge vari kuyedza kuwana iyi data chinyararire kuti vashandise ivo pachavo. Aya ma SDK anoshandiswa nemaapplication anozivikanwa.
ZveGNU Project, iyo Chrome browser chishandiso chekutarisa nekuti:
Iyo inobvumira zviuru zvevateereri kupinda mumakomputa evashandisi uye nekuzivisa mapeji avanoshanyira kumakambani ekushambadza uye e data, uye kutanga kune zvese kuGoogle. Uyezve, kana vashandisi vaine account yeGmail, Chrome inozvibatanidza nayo kuti ivandudze yavo profiling. Pa Android, Chrome inozivisawo Google nezve kwairi.
Ehezve ivo havazvirambe ivo pachavo nekurumbidza ice cat, yakagadziridzwa vhezheni yeFirefox, ine zvimwe zvakavanzika zvemukati.
Iwe unogona kuona izere runyorwa rwezvichemo pano. Zvimwe zvinoita kunge zvakamanikidzwa kwandiri, asi chikamu chidiki chandiri kubika chinotyisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » GNU chirongwa chinopesana neGoogle. "Google software haina malware"
Ivo vanotaura zvakajeka izvo hapana anoita kunge anonzwisisa: kuti vanoshungurudza vanhu vanoshandisa makomputa, vachitora mukana wekusaziva kwedu. Pamwechete, kuregererwa kwemunhu mukutarisana nekutyorwa kwemutemo kunofanirwa kupa siginecha yake pasina zvazvinoita, asi makambani aya anogara achitiita kuti tigamuchire marongero epachivande anopikisana nekodzero dzedu dzekutanga uye, patinodaro, hatichanakidzwa kudzivirirwa kwatino kupihwa nemitemo pachinzvimbo chekukwanisa kutora chikumbiro chekuti vakatimanikidza kubvuma mamiriro asiri pamutemo. Tinorasikirwa kunyangwe Kodzero dzeVanhu, izvo zvinogamuchirwa neyakareruka chokwadi chekuti isu tiri vanhu.
Zvinotaridza zvakakwana kwandiri kuti kune vanhu vanotaura zvinhu zvakajeka. Dai zvisiri zveFSF neGNU Project isu tanga tichitoona kodzero dzedu dzese dzichityorwa pasina imwe nzira yekudai. Kutenda kumasangano aya isu tine dzimwe nzira.
Tinofanira kusimudzira nekusiya Google, Facebook, Windows ... Chinhu chete chinobvumidza kushungurudzwa uku kuenderere mberi ndechekuti vanoramba vachiita mari nekutipedzera. Dai isu taizosiya mabhureki avo, mamiriro acho aizochinja. Asi chero bedzi isu tichiramba tichive hwai, Google nekambani zvicharamba zvichitifudza.
OpenDrop, iyo yakavhurika sosi analog yeApple's AirDrop